Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii xarunta Dhexe ee Dagaaladii ugu dambeeyay oo tafatiran iyo xaaladda uu ku sugan yahay ciidanka cadawga
Warbixintii xarunta Dhexe ee Dagaaladii ugu dambeeyay oo tafatiran iyo xaaladda uu ku sugan yahay ciidanka cadawga
Posted by ONA Admin	/ January 9, 2014
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soodhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in dagaaladii lagu hayay ciidamada gumaysiga Itoobiya uu si fiican uga socdo guuda ahaan dalka, dagaaladaa oo lagu jabiyay khasaare naf iyo qalab ahna uu gumaysiga kala tagay goobihii la’isku fara saaray. Waxaa kaloo ka mid ah warbixinta ciidamada gumaysiga iyo maxaysatada la socota oo dhexdooda iska dila iyo qaar ka goostay oo iska dhiibay xadka Somaliya. Warbixintaa oo faahfaahsan halkan ka akhriso;
7/12/12 Falfal oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 3 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
27/12/13 Waabrame oo Iimaybari katirsan weerar aad u xoogbadan oo ay CWXO ku qaadeen ciidan uu gumaysigu leeyahay oo halkaas fal danbiyeedyo kala duwan ka waday waxaana ciidamada cadawga lagadilay 30 askari 19 kalana waa laga dhaawacay.
Isla 27/12/13 Waabrume oo Iimaybari katirsan dagaal markale kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
2/1/14 Horahowd oo Jigjiga katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faah-faahin tiisa lahaynin.
4/1/14 Faarayso oo Iimaybaro katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 4 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/1/14 Geelxasiliye oo Garigo’an katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
Dhanka kale waxaa 2/1/14 Jigjiga dagaal ciidanka gumaysiga dhaxdooda ay isku farasaareen waxay iskaga dileen 2 shiihalaqe waxaa mid kamid ah magaciisa lagu sheegay Daahir dheere.
2/1/14 Magaalada Boorame ee woqooyiga Soomaaliya waxaa iska dhiibay 3 shaalaqe oo magacyadooda lagu kala sheegay Cabaase, Cumar iyo Daahir.
5/1/14 Dhuure oo Qabridahare katirsan waxuu dagaal kudhaxmaray labo kooxood oo ciidanka gumaysiga kawada tirsan waxayna iskadileen 2 askaro oo lagu kala magacaabo Ina cabdi qani maxamad ciise iyo Ina daahir cabdulahi maxamad. Dagaalkaas kadib waxaa ciidankaas kagoosatay 10 askari.
6/1/14 Caleen oo Shilaabo katirsan waxaa ciidanka cadawga ka goostay nin lagu magacaabo Geeljire.